Nanolotra volavolana tetiandro sy anto-bola tokony haloa izy ireo ho fandrasaina anjara amin’ny fanontana bileta tokana. Ny alatsinainy 28 oktobra 2019 izao no vinavinaina hanaovana ny fifidianana. Ny 20 jolay 2019 ary haharitra 15 andro, izany hoe hifarana ny 3 aogositra ny fametrahana ny antontan-taratasy. Ny 15 aogositra kosa no hamoahana ny lisitry ny kandida. 3 hetsy hatramin’ny 5 tapitrisa ariary arakaraka ny sokajin’ilay kaominina (Catégorie) sy arakaraka ny isan’ny mponina izay iankinan’ny isan’ny mpanolotsaina ny anto-bola haloa, hoy ny CENI. Nangingina ny raharaham-pifidianana depiote nisiana olana maro, izay andrasana andro vitsy ny fivoahan’ny valim-pifidianana depiote. Mivoaka ihany koa io ny volavolana tetiandron’ny fifidianana ben’ny tanàna, izay atao andro alatsinainy. Sao dia misy zavatra alamina, toy ny fitsipi-dalao na koa ny rafitra miantsoroka ny fifidianana izay niteraka adihevitra maro niainga tamin’ny fifidianana filoha.